zom-pirenena roa. (Fifindra-monina ny lalàna) - mangataka-ny-mpisolovava - Alemaina mpisolovava an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
zom-pirenena roa. (Fifindra-monina ny lalàna) - mangataka-ny-mpisolovava
Mila manapa-kevitra izay lalana tianao haleha
Tompokolahy sy tompokovavy, herinandro vitsy lasa izay ny lahy no terakaNa dia ny tenako aza aho ny ray (alemà-pirenena), ny reny dia rosiana, izahay hiaina na any Alemaina. Ireto Fanontaniana Manaraka Ireto.)) ny ankizy ankoatra ny alemana avy hatrany ny rosiana manana zom-pirenena Ode valinteny avy amin'ny mpisolovava mahay (*** Araka ny rosiana manaraka ny fepetra takiana, ny zanakao, satria izany ihany no manana ny iray rosiana ray aman-dreny, ary tsy ao Rosia teraka, dia tsy avy hatrany ny rosiana olom-pirenena. Izany dia ny rosiana manana zom-pirenena, na izany aza, afaka unproblematic ny vadiny, dia afaka mangataka amin'ny mety rosiana solontena any ivelany - ny Masoivoho ao Frankfurt iray. Raha te hangataka ny rosiana solontenan'ny birao any ivelany ho an'ny antsipirihany bebe kokoa. Ny safidiny ho amin'ny fahazoana ny rosiana olom-pirenena ho an'ny ankizy dia, mazava ho azy, ny ankizy iray dia afaka miditra unproblematic Rosia nefa tsy voatery hangataka visa. Raha toa ka ny zanakao nanana afa-tsy ny anarana maha-olom-pirenena, dia tokony ho afaka mandeha any Rosia, tahaka ny hafa rehetra alemana olom-pirenena, pasipaoro sy ny"visa"ho an'ny Rosia. Ny fisoratana anarana ny zaza ao anatin'ilay pasipaoro ny reniny dia azo atao, na izany aza, izany dia atao araka ny fahalalana fotsiny ihany, raha toa ny ankizy ihany koa ny fiarovam-pirenena rosiana. Ny tombon-dahiny ny fahazoana ny rosiana olom-pirenena, araka ny fanamarihana, fa ny zaza tsy ny zon ny fanjakana rosiana dia mety milaza ny mpikambana ao, fa koa ny adidy, indrindra fa ny miaramila.
Amin'izao fotoana izao, tsy maintsy, na izany aza mijery kely anefa milaza ny fomba ny rosiana ny fitsipika ho an'ny fanompoam amin'ny valo ambin'ny folo taona.
Amin'izao fotoana izao, izany no azo inoana ny tranga hoe ny lehilahy eo anelanelan'ny valo ambin'ny folo sy fito amby roa-polo taona no iharan'ny tsy maintsy atao miaramila, ary maimaim-poana ny fividianana, na ny toy izany dia tsy azo atao amin'ny fomba ofisialy.
Raha te-hampihatra ny zanany rosiana olom-pirenena, tokony ho mailo ity vokatry ny Mazava. Tsy afaka ny tsy hivadika izy.
Ianao dia manana, amin'ny fohy, ny safidy dia manome ny ankizy amin'ny teny malefaka sy hijanona ao Rosia ho toy ny olom-pirenena eo an-toerana, amin'ny rehetra ny adidy, ny rosiana olom-pirenena hihaona, na tsy manome, fa ny zanakao ny rosiana olom-pirenena, avy eo dia izany fotsiny ny anarana sy ny olom-pirenena dia ny rosiana manampahefana ho toy ny vahiny.
Tsara tolakandro, Ramatoa Lawrence, voalohany indrindra misaotra noho ny valin haingana.
Ireto manaraka ireto fangatahana: 'ny zanakao dia afaka mahazo ny maha-olom-pirenena rosiana unproblematic' izay ny zom-pirenena ROA dia azo atao (ity dia mihatra ho ela velona na, ohatra, hany ka ho.
Taona.) na isika no tsy maintsy mifidy - ny raharaha fa ny fanjakana rosiana dia naniry ny zom-pirenena - dia eo amin'ny rosiana NA ny alemana zom-pirenena.
Ny zaza no teraka tao Alemaina, efa ho olom-pirenena alemana ary tsy maintsy Misafidy amin'ny ambony-nofaritana ho tranga (eo dt.
na ny rosiana olom-pirenena) dia ny dt. Zom-pirenena Ny ankizy any ny vintana toerana mba ho afaka samy manana zom-pirenena, nefa tsy voatery ho izany na manohitra ny iray amin'ireo roa manapa-kevitra. Izany no lalàna ny alemaina AU mpivady noho ny fisian'ny alemana ray aman-dreny. Satria ny ray aman-dreny hafa dia ny rosiana olom-pirenena tsotra, ny zanaka no manana ny fahafahana manana ny rosiana manana zom-pirenena. Afaka mandinika afa-tsy raha toa ny zaza tamin'ny fotoana fahazoana ny rosiana manana zom-pirenena, ny zom-pirenena alemana no very mifanaraka amin'ny fizarana faha-dimy amby roa-polo Serfa. Na izany aza, ny fatiantoka ny zavatra zom-pirenena araka ny faha-dimy amby roa-polo Serfa ny raharaha ny zaza tsy ampy taona eo ambany ray aman-dreny hikarakara ny zanany ihany no mitranga rehefa ny toerana misy ny fampiharana eo amin'ny mari-pankasitrahana ny rosiana manana zom-pirenena dia neken'ny-moraly fitsarana. Ny fangatahana dia atao tsy misy toy izany ny fankatoavan'ny fitsarana, mba hitandrina ny zaza, noho izany, ny anarana maha-olom-pirenena sy hahazo ny rosiana manana zom-pirenena. Raha te-ho ny hany mba handeha zato isan-jato antoka, dia tokony ho alohan'ny ny fampiharana ny fahazoana ny rosiana Zom-pirenena ho an'ny ankizy, ny mahay ny vahiny ny fahefana. Ireo vahiny ireo fahefana dia afaka manome toky anareo amin'ny fomba ofisialy fa ny ankizy dia afaka hitandrina ny zavatra zom-pirenena, na dia eo aza ny fahazoana ny rosiana olom-pirenena.
Mpanova dia ady manohitra ny maty An-drano